Ngaphakathi Isikhathi Sonyaka 4 se- "Veronica Mars" (i-Article 2 ye2) - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - NAB Show LIVE
Ikhaya » Okufakiwe » Ngaphakathi Isikhathi sonyaka 4 se "Veronica Mars" (i-Article 2 ye2)
Ngaphakathi Isikhathi sonyaka 4 se "Veronica Mars" (i-Article 2 ye2)
Veronica Mars umlingisi we-cinematologist uGiovani Lampassi (isikhungo, isigqoko esiluhlaza okwesibhakabhaka) nesisebenzi sakhe kwiseti. (© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. Wonke Amalungelo Agodliwe.)
Nini Veronica Mars okokuqala uNdunankulu ku-UPN ngoSepthemba 2004, uchungechunge belunokubukeka okuyingqayizivele, okunesitayela olwahlukanisa ngochungechunge lwethelevishini lwalesikhathi. Ezigcawini zanamuhla, imibala eyinhloko yayihamba phambili, ifreyimu igqotshwe obomvu, ama-eyellows, imifino, amablue namawolintshi. (Onke amawindi asehhovisi lakwa-Mars In Uphenyo bekubonakala sengathi enziwe ngengilazi enamabala.) Amaflakhbhuli avamile, ngokugcizelela kwawo imigqa ephansi ehlanekezelwe, ahlungwa umbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Lokhu kubheka ukuqhubeka kwesizini 'yokuqala emithathu yonyaka. (Isizini yochungechunge lwesithathu lwasakazwa ku-CW, eyathatha indawo ye-UPN ne-WB ngemuva kokuhlanganiswa kwamanethiwekhi amabili ne-CBS.)
Kepha lapho izinhlamvu ziphinde zafika ku-2014 Veronica Mars i-movie, babehambisana nokubukeka okumnyama, okumbala. Ukusetshenziswa kombala okungenangqondo ngamabomu kwaba indlela kulaka olunqotshwe ngokwengeziwe. (Akusekho amawindi enziwe ngengilazi eMars Uphenyo.) Lesi sitayela sokubuka okungokwemvelo siyaqhubeka ochungechungeni 'lwesizini lwesine olwalunezimpikiswano ngoHulu ngenyanga edlule, lapho uGiovani Lampassi ethatha izinso njengoMqondisi omusha Wezithombe. Lampassi wayenomusa ngokwanele ukukhuluma nami ngeminikelo yakhe kulo mbukiso nangendlela futhi kanjani yendlela yochungechunge lwamanje lwokubuka.
"Ngiqale ukusebenza e-1994 efanelekile eSeattle kumafilimu ama-program kanye namaphrojekthi amancane emnyangweni wokukhanyisa isethi futhi ngasebenza ngokuzikhandla ngisebenza uchwepheshe oyikhanyisi oyisikhulu," kusho uLampassi. “Ngiye ngaya e-Los Angeles futhi, ngemuva kokusebenza emafilimini amaningi wesabelomali esikhulu kakhulu esinama-cinematograph amakhulu afana noJohn Alonzo (ASC), Peter Levy (ASC, ACS), uGeary McLeod (ASC), noKrishna Rao, ngaqala ukudubula amaphrojekthi amancane waze wanikezwa. Iphathi Phansi, okhiqizwe nguRob Thomas. Bekungumbukiso lo owangisungula njengomculi we-cinema wesikhathi esigcwele. Kusukela lowo mbukiso, ngahamba ngadubula imibukiso ehlukahlukene ye-TV, efana Hlala ubusuku bonke futhi I-Brooklyn Nine-Nine. Ngemuva kwalokho Veronica Mars esongelwe, nganikwa Izinto Ezisigidi ukudubula i-ABC, futhi njengamanje ngiseVancouver ngisebenza isizini emibili yalowo mbukiso.
"Inselelo enkulu kunazo zonke Veronica Mars kwakuwukukhokha inhlonipho nokugcina okwanele ochungechungeni lwangempela ithoni nesitayela, kodwa futhi ukukuvuselela futhi kukhombisa ukuthi uVeronica wayesekhulile. Siphinde futhi sadubula ukubalwa kwamakhasi amakhulu, ngakho-ke ukukwazi ukuhamba ngokushesha, kepha futhi nokugcina ukubukeka okuhle kakhulu, bekubalulekile. Kwakukhona futhi amanye amasethi abekhiwa ngamabomu amancane kunasethi ejwayelekile yokuphoqelela uhlamvu lukaKristen lube esimweni se-claustrophobic. Lawo masethi abeyinselele ikakhulukazi ngoba ukukhanyisa bekusondele kakhulu kubalingisi eduze. Ngaphezu kwalokho, ngoba saphuthunyiswa ekukhiqizweni ngokushesha okukhulu futhi singenamkhawulo esiteji, okokulungisa izibani kwahlanganiswa impela zakhonjwa phezulu komunye nomunye ubheke ngakuye. ”
Ngibuze uLampassi ukuthi kungani Veronica Mars yashiya indlela yayo yasekuqaleni eyenziwe yathinteka nokuthi wakuthola kanjani ukubukeka okumnyama, okucashile. "Isizathu esikhulu soshintsho ukuthi, ngenkathi kubhekwa izinkathi zokuqala ezintathu kwaba yisthonjana kuzo UVeronica Mars, ibibhalwe kuleso sikhathi esithile futhi ibuye ithintane nempilo kaVeronica, ”echaza. “Bekunokubukeka okulungele izwe le-CW. Besifuna abantu bazi ukuthi uma bebuka inguqulo yamanje bebebona inguqulo ekhulile yeVeronica. Besifuna ukucindezela umbala wombala futhi sakhe ukubukeka okusha. Lokhu kutholwe ngokusebenza nomklami womkhiqizi uCraig Stearns ukuthola ulwanga olungavelanga kude kakhulu ukuba lube yimibala egcwele. Ngemuva kwalokho sahlaziya umkhiqizo wokugcina ngesikhathi sokubala imibala ezindaweni esidinga ukuya kuzo.
“Sisebenzise i-Panavision DXL2 entsha nengilazi yePana TV Vintage Prime futhi sasebenzisa ukusondeza kwePanavision ngamabomu ukufanisa nengilazi yevintage. ngisebenzise Hollywood Izihlungi zeMilingo emnyama ezinama-Softs we-Classic ukuze zengeze ukuthambisa. Ukukhanyisa bekuyingxube yama-tungsten amayunithi we-classic tungsten ngama-Arri S-60's kanye nesiko elenziwa ngokukhanya kwe-LED okwenziwe ngeCustom Entertainment Lighting. Izibane ezintsha ezenziwe nge-CEL zasivumela ukuthi sibeke izibani lapho izibani ezijwayelekile bezingalinganiselwa khona futhi zivunyelwe ukuguqulwa okuningana ngombala, ubukhulu, nobuthakathaka. Bungumkhiqizo omangalisayo ngoba bangasindi futhi banomphumela omuhle kakhulu. Isazi sami esikhulu ukukhanyisa uLarry Sushinski ukwazile ukuthatha lezi zibani ezintsha kanye namalambu ethu ajwayelekile futhi zonke zilawulwa ngebhodi lethu lokukhanyisa; wakwenza kwaba lula futhi kushesha.
“Sithumele imibala noGareth Cook eSiseko. Ngaphambi kokuthi siqale ukukhiqiza, mina noGareth saba nomhlangano mayelana nokuvuselelwa Veronica Mars bheka. UGareth wayenze umsebenzi wombala kokwasekuqaleni Veronica Mars, kanye nefilimu yesici, ngakho-ke ubengumuntu omuhle kakhulu ekwakheni indlela esizokwamukela ngayo okwangempela kepha nokho abukeze ukubukeka. Imvamisa, uma sekuqediwe ukusikwa, uGareth wayezokwenza okokuqala episode, bese ngingena ngaphakathi ngihlale naye ukuze kwenziwe ushintsho lokugcina. Sasizosebenzisa amawindi wamandla bese sisebenza ngokubambisana kumbala wokugcina nokwehluka. Bekumnandi kakhulu ukusebenza naye nokwenza lo msebenzi ubukeke. ”
Kusukela okuningi Veronica Mars Kuthathwa ezindaweni zangempela, benginelukuluku lokuthi izimfuno zokudutshulwa kwendawo zihluke kanjani ekusebenzeni esiteji somsindo. "Bobabili empeleni banezinzuzo zabo nemidwebo yabo emuva," uLampassi ungitshele. “Ngiyakuthanda ukudubula endaweni ngoba, kimina, imvelo yiyona ekhombisa ukukhanya kwesehlakalo. Isitayela silandela imvelo, futhi lapho usukwazi ukufaka isitayela sephrojekthi ngokuhlangana kuphela nalokho indawo okukuvumela, khona-ke usuwufezile umsebenzi osusele. Lowo ngumsebenzi we-cinematograph. Kwi-soundstage, kuhle ngoba ungasho ukuthi, 'Ngifuna i-8 - 20ks yamafasitela futhi unginike ukugcwala kokwehlisa umehluko,' kepha ulawula ekugcineni umsindo. Endaweni, ungahle udubule lapho idolobha lingavumeli khona ukuthi kube khona okokukhanya okuza ngamawindi, noma kungadingeka usheshe ukudubula ngaphambi kokushona kwelanga, noma empeleni nelanga wenza yehla futhi kufanele ukwenze ubukeke njengosuku, ngakho-ke uphoqelekile ukuthuthuka-futhi yilokho engikuthandayo, ukuxazulula inkinga. Kulesi sigameko esisodwa esivelele: lapho uLogan eya eCity Hall futhi ebona uParker, lokhu kudutshulwe kwaphela ebusuku futhi ngicabanga ukuthi sikususe kahle. Ekupheleni kosuku, kusamele uzuze ukubukwa kombukiso, ngakho-ke ukukwazi ukuthola ukuthi konke kuhambe kanjani kubalulekile. ”
Njengomqondisi weScot Winant, engaxoxisana naye ngesihloko sokuqala kulolu chungechunge, uLampassi wakuthola esebenza naye Veronica Mars cast and crew kube okuhlangenwe nakho okuhle. "Bonke abasiki beqembu labasebenzi Veronica Mars sihlangane ngokushesha okukhulu — kweminye imibukiso, kuthatha isizini yonke ukufika ezingeni lokuthi wonke umuntu asebenze ngokubumbana — kepha bengizizwa ngathi sonke sihlangana ndawonye ukufeza izinhloso zansuku zonke ekugcineni kwesiqephu sokuqala. Ngizoqala ukuchaza lokho esikufunayo noma esikudingayo futhi umuntu engizokhuluma naye aqede umusho wami nalokho engangikufuna.
“Ukusebenza nabalingisi kwakuyinto ekhethekile. Saqala ukubiza uKristen ngokuthi 'unicorn' ngoba wayekwazi futhi ekwazi ukwenza izinto eziningi kakhulu. Kunzima ukuchaza, kepha ubazi nje ukuthi ayini wonke amaqhinga ethu amancane, futhi, hhayi ukuthi uyazi kuphela ukuthi sizama ukufeza ini, usebenze ukuze asisize senze izinto zenzeke. Ukube bekungengenxa yobuchwepheshe bakhe kwezobuchwepheshe emsebenzini wangemuva kwesigcawu, angiqiniseki ukuthi ngabe sikwazile ukukhipha ezinye zezinto esasidingida ukuzifeza.
"Nginga ukuthanda ukuhlanganyela nenye inkathi ye UVeronica Mars; ziningi izinto engingathanda ukuhlasela ngazo ngokwehlukile. Ngicabanga ukuthi ngingumgxeki wami omkhulu kunabo bonke, kepha lapho ngibe nesikhathi sokucabanga ngombukiso, manje ngiyazi engingathanda ukukuhlelela okulandelayo. UKristen, u-Enrico, nabo bonke ababekhona babeyiqembu elihle kakhulu ukusebenzisana nabo nokubabukela besadlala kuyilungelo elikhulu. ”
Isimo Esisha Sokusakaza se-Broadcasting: Digital Comm Link's Digicaster SoloCam - Disemba 11, 2019
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe CBS OKWE I-FOR-A, izinhlelo ezihlukile, I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor HULU Kristen Bell URob Thomas Ama-spears nama-Arrows I-CW I-WB Ubuchwepheshe be-TV I-Ultra HD Forum I-UPN Izinhlelo ezihlukahlukene Veronica Mars Umlingisi wevidiyo	2019-08-19
Ngaphambilini: Izinzuzo Zokusebenzisa i-Global Media Network yemidlalo ebukhoma ephezulu